Utah, Hawaii, Idaho, Kentucky, New Mexico: Gobolada ugu hurdo la'aanta ah ee Maraykanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Utah, Hawaii, Idaho, Kentucky, New Mexico: Gobolada ugu hurdo la'aanta ah ee Maraykanka
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dalxiiska • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Hawaii waa gobolka labaad ee ugu hurdo la'aanta badan Maraykanka.
Hawaii ayaa loo aqoonsaday inay tahay gobolka labaad ee Maraykanka ee "hurdo la'aanta ugu badan", sida laga soo xigtay Google.
Xog cusub ayaa ogaatay in kuwa ku nool Utah ay yihiin dhibatada hurdada ee Googling in ka badan gobol kasta oo Ameerika ah.
Hawaii iyo Idaho waa gobolada labaad iyo saddexaad ee ugu hurdo la'aanta sida ay u kala horreeyaan raadinta Google.
Hawaii sidoo kale waxay ahayd gobolka baaray 'Sida loo seexdo' lacagta saddexaad ee ugu sarreysa.
Daraasad ay sameeyeen khubarada hurdada ayaa falanqeeyay Google isbeddellada xogta si loo abuuro tusmaynta si loo sameeyo darajo qeexan oo gobollada ay helayaan qaddarka ugu yar ee hurdada oo raadinaya caawimada ugu badan.
Erayada la darsay waxaa ka mid ahaa, 'Ma seexan karo', 'Sida loo seexdo', 'Caawinta hurdada' iyo 'hurdo wanaagsan'.
Utah Googled arrimaha hurdada iyo mashaakilaadka in ka badan gobol kasta oo Ameerika ka mid ah, isaga oo raadinaya dhibaatooyinka hurdada oo si joogto ah uga sarreeya gobollada kale. Dadka deggan Utah waxay google-gareeyeen 'Sida loo seexdo' in ka badan gobol kasta oo Mareykanka ah.
Hawaii Waa gobolka labaad ee ugu hurdo la'aanta badan Ameerika oo leh 24 dhibcood. Hawaii sidoo kale waxay ahayd gobolka baadhay 'Sida loo seexdo' qaddarka saddexaad ee ugu sarreeya, taasoo keentay celceliska raadinta hurdo la'aanta Google ee gobolka.
Idaho waa gobolka saddexaad ee ugu hurdo la'aanta badan Mareykanka marka loo eego Google baadhida Idaho waxay raadisay 'Sida loo seexdo' mugga labaad ee ugu sarreeya mid kasta oo ka mid ah gobollada iyadoo sidoo kale raadinaysa 'Ma seexan karo', oo ah qaddarka saddexaad ee ugu sarreeya gobol kasta, taas oo gacan ka geysanaysa hurdo la'aantooda.
New Hampshire waxay raadisay ereyga 'Ma seexan karo' tan ugu badan dhammaan kontonka gobol, haddana waxay raadisay saddexda erey ee kale ee hurdo la'aanta aad uga yar marka la barbardhigo, taasoo siinaysa gobolka guud ahaan dhibco hurdo la'aan ah oo ah 84 - taasoo ka dhigaysa 17-aad ee ugu hurdo la'aanta. gobolka Ameerika.
Dadka deggan Waqooyiga Dakota Google-ka waxay Google-ka-dhigeen 'hurdo ka wanaagsan' in ka badan gobol kasta inkasta oo la caddeeyay in ay ka mid yihiin gobollada ugu hurdo la'aanta ah, iyagoo ku jira kaalinta 41-aad ee ugu hurdo la'aanta ah oo leh dhibco hurdo la'aan ah 138 marka la barbardhigo Utah's 23.
Dawladaha ugu Hurdo la'aanta Ameerika, sida laga soo xigtay Google: